Iowa ayaa soo weriyey maalinta ugu dhimashada badan sababtuna tahay COVID-19 iyadoo ay jiraan | KWIT
Gudoomiyaha gobolka Kim Reynolds ayaa sheegay in gobolka uu ku sameynayo daba gal dheeri ah gobolka uuna qorsheynayo inuu ku daro tijaabooyin dheeri ah usbuuca soo socda si wax looga qabto cudurka dillaacay.
Waxay kaloo difaacday doorashadeeda inay ka furto maqaayadaha iyo meheradaha kale ee inta badan gobollada Iowa iyada oo kiisas yar ay ka bilaabanayso Jimcaha
Goobta looga shakisan yahay inuu ka dillaacay Siouxland waa Warshada Cunnada Tyson ee Dakota City. Shirkadda ma shaacin doonto tirada shaqaalaha la saameeyay. Afayeen ayaa sheegay in warshada ay shaqeyneyso, laakiin aaney aheyn wax soo saar buuxa. Hawlgallada dib ayaa loo sii kiciyay sababo la xiriira taxaddarrada amniga iyo shaqaalaha oo shaqada ka maqnaa.
Degmada Dakota ayaa hadda leh 704 kiis oo la xaqiijiyey oo ay ku jiraan saddex degane oo xarun daryeel-caafimaadeed ku leh Koonfurta Sioux City.
Milkiilaha Dugsi Qurxinta ayaa yidhi dadka degani ma muujinayaan wax astaamo ah ama astaamo cudur ah, laakiin waxay ku sugan yihiin go'doon.
Dhamaan dadka daggan waxaa la tijaabiyay kadib markii qof shaqaale ah uu tijaabiyey CVEID-19 usbuucii hore.
Mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ugu weyn gobolka ayaa lagu arkaa koror ku dhaca bukaannada COVID-19.
Madaxa ugu sareeya caafimaadka ee MercyOne ayaa sheegay in xaaladu aysan hada ku filneyn. Laakiin, wuxuu arkayaa kororka taraafikada iyada oo loo marayo E.R. iyo, isbitaallo badan oo isbitaal iyo koror weyn oo xagga baaritaanka ah.
Guddoomiyaha gobolka Nebraska Pete Ricketts ayaa sheegay in inkabadan 104,000 ay iska diiwaan geliyeen tijaabada suurtagalka iyadoo loo marayo TestNebraska.com.
Wuxuu leeyahay himilo inuu sameeyo 3,000 imtixaan maalin kasta.
Iyada oo ciidaha u soo dhawaanayaan sida Cinco De Mayo, Ricketts ayaa ku boorriyay dadka deegaanka in ay sii wadaan fogeynta bulshada isla markaana ay xaddidaan tirada kulamada 10.